TOEIC ကဘာလဲ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan TOEIC ကဘာလဲ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
TOEIC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာစာမေးပွဲအတိုကောက်.TOEIC မဟုတ်တဲ့များအတွက်ဒီဇိုင်းအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်-အင်္ဂလိပ်၏ဇာတိစပီကာ.အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုအသက်တာ၏အကြောင်းအရာများနှင့်လူမှုရေးအလုပ်ခွင်အခြေအနေများလည်းပါဝင်သည်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအပေါ်အခြေခံသည်"နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်း".ကမ္ဘာတဝှမ်းထက်ပိုခုနစ်ခုလူဦးရေသန်း TOEIC စမ်းသပ်မှုယူ,ကျော် 14,000 ကုမ္ပဏီများမှ,နိုင်ငံပေါင်း 150 ထဲမှာကျောင်းများတွင်သို့မဟုတ်အစိုးရအေဂျင်စီများ TOEIC ချမှတ်.TOEIC နှစ်ခုအဓိကပစ္စည်းများသို့ကွဲပြား:နားထောင်ခြင်းနှင့်ဖတ်ရှုခြင်း.သငျသညျစကားနှင့်စာအရေးအသား၏စမ်းသပ်မှု add နိုင်ပါတယ်.စမ်းသပ်မှု၏အသေးစိတျအဘို့,TOEIC စာမေးပွဲဖတ်ရှုပါ-ထိုင်ဝမ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.